I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Kivaan
Ukubuka Kwengadi Yamakamelo Amabili: Inkosi enkosini, amawele endaweni yesibili kanye nombhede oyi-murphy egumbini lokuhlala. Iyunithi yokubuka ingadi. Ukuhlala okuphezulu 6.
Igama ekubhukheni kufanele lifane negama eliku-ID yesithombe. Indawo yokungcebeleka idinga idiphozi yomonakalo Ebuyiselwayo engu-$100 ngesikhathi sokungena.
Indawo yokudlela Uhlolojikelele
Vuswa ukushaya izandla kokuntweza okuhlanzekile, uthele ingilazi ende yejusi yewolintshi, bese uqala usuku lwakho e-Denarau Island. Lapha, izingcindezi zokuphila ziyantanta lapho ukhukhuleka ngaphezu kwezixhobo zamakhorali futhi uhlangana nemisebe ye-manta. Njengoba ubusuku obugcwele izinkanyezi bungena, hlola ifa labantu baseFiji—kusuka esikweni lasendulo lokuhamba emlilweni kuya kumdanso womkhonto. Isidlo sakho sakusihlwa sibhakwa ku-lovo futhi isongwe ngamahlamvu kabhanana.
Lena iFiji—iqoqo leziqhingi ezingaphezu kuka-300 eNingizimu Pacific. Amabhishi, izingadi, igalofu, izinhlobonhlobo ezithokozisayo zezindawo zokudlela, ama-boutiques nemigoqo. Kuningi okumelwe ukwenze, ungase ukhohlwe ukuphumula. Kodwa kulula eziqhingini, futhi ijubane leFiji lihlehlisiwe futhi alikhathazeki.
Ipasipoti iyadingeka futhi kufanele ibe semthethweni izinyanga eziyisi-6 ngemuva kokuhlala. Xhumana (I-URL HIDDEN) ukuze uthole ulwazi lwakamuva ngamaphasipoti, ama-visa kanye nemigomo.
Inkampani yezindiza isuka ngeLanga, ULwesibili, ULwesine nangoMgqibelo kuphela! Izindiza zase-US zifika ngo-5:00 a.m. futhi zisuka ngo-10:00 p.m. Kuphakanyiswa ukuthi izihambeli zibhukhe amayunithi ngobusuku bangaphambi kokufika kwazo kanye nosuku olungemva kokuhamba kwazo.
Ugesi wamanje ungu-240V/AC50 3 pin, ngakho-ke isiguquli siyadingeka ezintweni ze-plug-in. Xhumana nomhlinzeki wakho weselula ukuze ufunde mayelana nokutholakala kwamanye amazwe.
Intela Yenzuzo Yesevisi (STT)
I-Environmental Levy (EL)
Uhulumeni wase-Fijian wenze intela eyisibopho ye-Service Turnover Tax (STT) kanye ne-Environmental Levy (EL) kubo bonke abanikazi nezihambeli zokuhlala e-WorldMark Fiji. Lezi zintela zilinganiselwa ngamadola ase-Fiji futhi kufanele zikhokhwe ngokugcwele lapho usuphumile. Amazinga aboniswe ngezansi ahlanganisa kokubili intela ye-Service Turnover kanye ne-Environmental Levy. Izinkokhelo zihlolwa ngosuku, ngohlobo lweyunithi, futhi zingashintsha ngaphandle kwesaziso.
nit Thayipha uMsombuluko-Thu Fri-Sat Sun Maviki onke
Igumbi lokulala elingu-1 $(INOMBOLO YOFONI IYAFIHLIWE) Igumbi lokulala $(INOMBOLO YOFONI IYAFIHLIWE) Igumbi lokulala $(INOMBOLO YOFONI FIHLIWE)
*Cishe amadola aseMelika
Uma ufika ekuseni kakhulu, kungcono ukubhuka iyunithi ehlola ngosuku olulodwa ngaphambi kosuku lwakho lokufika ukuze uqiniseke ukuthi ukungena kusenesikhathi kuyatholakala njengoba lingekho iyunithi yokwamukela izivakashi etholakalayo.
Ukugunyazwa kwesiginesha yekhadi lesikweletu akwamukelwe e-Wyndham Vacation Resorts ezindaweni zase-Asia Pacific. Uma uhlela ukusebenzisa ikhadi lesikweletu kulezi zindawo, sicela uxhumane nomhlinzeki wakho wekhadi lesikweletu ngaphambi kokuthatha uhambo ukuze usethe inombolo kamazisi yakho (i-PIN) ukuze uthole izigunyazo zokukhokha.
Ukufinyelela kwe-ATM kanye nokuhwebelana ngemali okulinganiselwe kuyatholakala endaweni yokungcebeleka. Indawo yokushintshisana ngemali iyatholakala phakathi nebanga lemizuzu eyishumi lokuhamba ngezinyawo ukusuka endaweni yokungcebeleka.
Inkokhelo ihlolwa etafuleni elingaphambili ukuze kushintshwe amathawula.
Ekuqaleni idolobha likashukela, iNadi manje iphumelela kwezokuvakasha futhi inezinhlobonhlobo zemisebenzi yezandla, ubucwebe, nezitolo zezikhumbuzo.
Insimu Yomdondoshiya Olele
Yasungulwa ngo-1977 ngumlingisi ongasekho uRaymond Burr, iGarden of the Sleeping Giant iyikhaya leqoqo elikhulu kunawo wonke lama-orchid eFiji. Kuvulwa: 9 a.m.-5 p.m., Mon.-Sat.; futhi ngeSonto ekuseni.